Ixabiso eliphantsi leziyobisi kunye neeNkqubo zeKhemesti: I-Q & A ene-Blink CEO uGeoffrey Chaiken - Ezintsha
Eyona Ezintsha Ixabiso eliphantsi leziyobisi kunye neeNkqubo zeKhemesti: Ingxoxo kunye ne-Blink CEO yezeMpilo uGeoffrey Chaiken
Umsunguli we-Blink Health kunye ne-CEO uGeoffrey Chaiken.Blink Health
Ukhathalelo lwempilo lwaseMelika luyabiza, kwaye ukuphazamisa inkqubo ehlala inzima kuye kwaba yinjongo yecandelo lobuchwephesha okwethutyana, ukwakha yonke into ukusuka kwii -apps zempilo ukuya kubanikezeli beinshurensi yokuqalisa.
Le wave yeenkonzo zobuchwephesha ikwabandakanya Blink Health , usetyenziso olunika abasebenzisi isaphulelo kumayeza kagqirha kumaxabiso aqinisekisiweyo. Ukuqalisa, okwabhengeza kule veki ukuvulwa kwekomkhulu elitsha kwisiXeko saseNew York, kungoku nje kunenethiwekhi yabathengi abangaphezu kwe-750,000, ngokutsho kwenkampani. Ukusukela oko yasekwa ngo-2014, iBlink iphakamise i-165 yezigidi zeedola kwimali eyinkunzi ngelixa yayikhuphisana nezinye iinkonzo zamayeza njengeGoodRx.
BONA KWAKHO: Sebenzisa iIgqirha zokuGunyazisa zinokunyusa i-Inshurensi yakho
Umqwalaseli uthethe nomsunguli we-Blink Health kunye ne-CEO uGeoffrey Chaiken malunga nendima yenkampani kwishishini lobuchwephesha bezempilo kunye nendlela itekhnoloji ejongene nabathengi ichaphazela ngayo inkqubo yezempilo yaseMelika.
Blink yinxalenye yeqela leziqalo ezinikezela ngeenkonzo zonyango lwezaphulelo, ezibonisa ukwanda kwebango lokuthenga amayeza ngokubanzi. Sitshele ukuba ukukhula kwenkampani kunxibelelana njani noku.
I-Blink yindawo yokuqala kunye nentengiso ye-e-commerce yamachiza amiselweyo. Ngokwembali, ekuphela kwendlela abaguli ababenayo yokunciphisa amaxabiso amiselweyo zazizezikhuphoni zokuphungulwa kweziyobisi, ezazifuna ukuba izigulana ziprinte ikhuphoni ngexabiso eliphantsi. Blink kuphela kwenkonzo enexabiso elisezantsi, exhaswa sisiqinisekiso somdlalo sexabiso lokusebenzela lonke uluntu eMelika. Kwaye kuba uBlink uyayamkela intlawulo, ngokungafaniyo nekhuphoni, ixabiso olibonayo lixabiso olibhatalayo. Nge-Blink, abaguli bathenga kwi-Intanethi kwaye emva koko banokuthatha kumthengisi wasekhaya okanye bakhethe ukuhanjiswa kwekhaya.
Njengoko imfuno yeBlink iqhubeka ikhula, kunjalo nakwishishini lethu. U-Blink uye wadlula kwinani elikhulu lokukhula kwi-2019, kwaye silindele ukuqhubeka nokukhula ngokukhawuleza, yiyo loo nto sishenxise ikomkhulu lethu laya kwindawo enkulu eNew York. Kutshanje songeze iiofisi ezintsha ePittsburgh, eSt. Louis naseBoston.
Ngapha koko, ungasixelela ukuba iBlink isebenza njani kunye nababoneleli kunye neekhemesti abathengi ngexabiso eliphantsi amayeza kagqirha?
Phambi kukaBlink, akukho nkampani ebinoxanduva oluyinyani, olungaphikisaniyo lokusebenzela izibonelelo zezigulana ngokubanika amaxabiso asezantsi kumachiza amayeza enziwe afana nalawo aveliswe ngumenzi. Ngaphakathi kushishino lwekhemesti, kukho iqela lesithunzi leenkampani ezaziwa njenge Abaphathi beeNzululwazi ngeeKhemesti, okanye iiPBM , ezinikwe ikhontrakthi ziinkampani zeinshurensi kwaye zithetha-thethana nee-pharmacy; Baneshishini elisecaleni lokufumana amachiza amayeza amiselweyo, ngamanye amaxesha anokunceda abathengi ukugcina imali kwixesha elifutshane, kodwa kuhlala kukhokelela ekunyukeni kweendleko zeziyobisi ekuhambeni kwexesha. Okubaluleke ngakumbi, kuba ezona nzuzo ziphambili ze-PBM zivela kwiinkampani zeinshurensi, ukunyaniseka kwabo kukwi-inshurensi, hayi kwizigulana. Blink, ngokuchaseneyo, unikezela ngamaxabiso asezantsi kwizigulana ngaphandle kolo ngquzulwano lomdla.
Zimbalwa kuphela ii-PBMs, kwaye basebenzisa amandla eemarike kangangokuba banokuhlawula ngaphantsi iikhemesti ngelixa bethe cwaka befumana amawaka ezigidi kwinzuzo eyongezelelweyo kubo. Sifuna ukwenza imeko apho sinokuthi sibonelele ngembuyekezo efanelekileyo kwiikhemesti ngelixa sithoba amaxabiso ezigulana, kwaye singakwenza oko ngokusika aba bantu baphakathi.
Uvele wavula ikomkhulu elikhulu kwisiXeko saseNew York emva kokulinganisa kunye nokuphakamisa inkxaso-mali kubatyali mali kule minyaka idlulileyo. Sitshele ukuba olu lwandiso lube khona njani kwaye zeziphi izicwangciso ezizayo zeBlink.
IBlink ikhule ngokukhawuleza okukhulu ukusukela ekuqaleni konyaka, kwaye sayishiya indawo yethu yangaphambili. Ukusukela oko kwaqala u-2019, songeze iinkokheli ezisibhozo eziphezulu, kubandakanya uMadan Nagaldinne njengegosa eliyintloko labantu, uBharath Chinamanthur njengesekela-mongameli wesigqeba sobunjineli, kunye no-Eytan Seidman njengentloko yemveliso, kunye nabanye abaza kwaziswa kungekudala.
Ezi zongezo zintsha, ezivela kwiinkampani ezaziwayo ezinje ngeAmazon, iFacebook neMicrosoft, zikhawulezisa ubuchule bethu bezinto ezintsha ngelixa zisinceda ekwenzeni inkcubeko ekhuthazayo ngokutsala abona bantu banetalente kububanzi obubanzi bamabala. Abasebenzi bakaBlink bakhula ngokukhawuleza babe zezona zinto zintsha kushishino, ezibaluleke kakhulu njengoko sisebenza ukusombulula ezinye zeengxaki ezinzima kwezempilo nakwezobuchwephesha, kunye nezisombululo zethu.
Ukongeza kubaphathi bethu abatsha, kulo nyaka kuphela, siqeshe iinjineli ezingaphezu kwe-50 kwaye sazisa ngaphezulu kwe-150 yabasebenzi abatsha bebonke. Ikomkhulu lethu elitsha le-SoHo lisibonelela malunga neenyawo ezingama-20,000 ezongeziweyo zesithuba sokuqhubeka nokwanda. Sijonge phambili ekongezeni amalungu eqela asuka echibini elinzulu leNew York lokhathalelo lwempilo kunye netalente yetekhnoloji.
Ukhathalelo lwempilo yenye yezona mveliso zishushu ziphazamisayo ngoku, ezihambelana nazo amaqhina ezopolitiko aphambili kushishino kunyulo oluzayo. Ucinga njani ukuba isihloko ukuba phambili kwiingqondo zaseMelika kukunceda ukuhamba kwetekhnoloji kukhathalelo lwempilo imiba, kunye neemveliso ziinkampani ezinjengeBlink?
Ukhathalelo lwempilo bekusoloko kuyeyona nto iphambili kubantu baseMelika. Ukuza kuthi ga ngoku, iinjongo ezintleizisombululo zomthetho zibe nefuthe eliqingqiweyo. Isinye kwisithathu sayo yonke imigqaliselo eshiyekileyo kwiIkhawuntari ngenxa yexabiso, kwaye isiqingatha sabantu asiyithathi imigqaliselo njengoko kumiselwe,engamkelekanga.
EBlink, asizukulinda urhulumente ukuba asombulule le ngxaki. Siyayikholelwaingasombululwa ngokukhawuleza okukhulu ngetekhnoloji kunye neemodeli zeshishini ezintsha. Kakade, sikwazile ukuba nefuthe kumaxabiso, ngamayeza angama-4,000 axabisa ngaphantsi kwe- $ 10 kusetyenziswa iBlink. Kwaye sibonisile amandla okuqhubeka nokunciphisa amaxabiso ngokusebenzisa iinkonzo ezintsha ezinje ngokuhanjiswa kwekhaya kunye nomnxeba wethu wezempilo, ovumela abaguli ukuba bangene kwi-Intanethi kwaye bagqibezele utyelelo lukagqirha, ngamanye amaxabiso asezantsi kushishino.
Ekupheleni kosuku, sinika abathengi amaxabiso asezantsi amiselweyo, amakhuluukwenza izinto elubala nokwanda kokunceda, kwaye siyazingca ngokumangalisayo ngokwenza njalo.
'Scream Queens' Ixesha le-2 yeNkulumbuso: Ukuphulukana nezigulana zakho
Iindawo ezintathu zokubhala ngokungaziwa kwi-Intanethi
'USophie kunye nokuPhuma kwelanga' liLuthando ukuba aluyonto yeNdaba yoLuntu yoLuntu
UMthetho oYilwayo weCreep Creep O'Reilly uphika yonke into, usola uThixo
uyithatha njani igalikhi njengentsholongwane
Dr john layke ulusu lolungiso oluntsonkothileyo
uhlala phi umanyano lwegabrielle
ngowuphi unyaka disney athenga iimfazwe zenkwenkwezi
Ixabiso lenkululeko iindaba zempungutye
Imizobo ye-louise bourgeois kunye nokuqwalaselwa